Akụrụngwa iji gbakọọ ugboro ugboro ma ọ bụ oge kachasị elu na roulette
Ọbụna ma ọ bụrụ na ị bụworị akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ tebụl shark a software maka gbakọọ oge kachasị elu na roulette ma ọ bụ ịkụ nzọ n'ịntanetị nwere ike ịbara gị uru.
Karịsịa ma ọ bụrụ na ndị mbido, roulette ma ọ bụ egwuregwu ndị ọzọ na-anụ ọkụ n'obi na-anwale ọtụtụ usoro, na-enweghị nyocha ihe ọ bụla nwere ike ibilite n'oge egwuregwu ahụ.
Otu n'ime kpochapụwo ajụjụ bụ banyere otu esi eme ya gbakọọ kacha igbu oge roulette nke otu ọnụọgụ ma ọ bụ ohere nyere nwere ike iwepụta.
Etu esi agbakọ oge kachasị na roulette: oge ​​kachasị elu ma ọ bụ hyper hyper?
E nwere ndị hụrụ igwu egwu megide igbu oge nke ọnụọgụ, ndị maka oge kachasị, mana ụdị egwuregwu ọ bụla masịrị gị, ekele Turbo Bet Calc, ị pụrụ n'ezie inweta a ihe echiche nke ihe na-echere gị ozugbo ị hụrụ onwe gị na-acha akwụkwọ ndụ table.
Etu ị ga-esi gbakọọ oge kachasị na roulette: cotú iji Turbo Bet Calc
Ozugbo ibudatara usoro ihe omume ahụ wee malite ịmalite nke dị na folda ahụ, ị ​​ga-ahụ onwe gị n'ihu windo mmemme naanị, nwere ọtụtụ ihe m ga-akọwa ozugbo:
Ọnwụnwa: bụ ọnụọgụgụ nke ịnwale nke mmemme ahụ ga-eme (na ọnụ ọgụgụ dị puku iri);
Tranche Lenght: bụ ogologo nke otu tranches, na ọnụ ọgụgụ ka ihe atụ anyị na-arịọ ka anyị nyochaa iri puku tranches nke 100 spins ọ bụla (ya mere ngụkọta nke 1 nde spins);
Ọnụ Ọgụgụ: ọ ga - abụ ọnụ ọgụgụ nke ọnụ ọgụgụ mejupụtara egwuregwu anyị chọrọ ịtụle. Dịka ọmụmaatụ, maka French roulette nọmba a bụ 37, maka American roulette, ebe ọ bụ na e nwere okpukpu abụọ, ọ bụ 38;
Nhọrọ Bet: bụ ọnụ ọgụgụ nke ihe ndị mejupụtara ohere anyị chọrọ nyocha: fọdụrụ na mpaghara roulette, 18 dị ka ohere dị mfe (Red / Black, wdg), 12 ruo iri na abuo, 6 ruo nke isii.
Ozugbo itinyere data ole na ole a, pịa bọtịnụ ahụ Malite ma chere oge a ga - eji rụọ ya, nke na - adabere n'ike PC gị.
Etu ị ga-esi gbakọọ oge kachasị na roulette: edata mbupụ
Site na ịhọrọ nhọrọ Nweta Ndepụta tupu ịmalite nhazi, ị ga-enwe ike ịlele ndepụta zuru ezu nke nsonaazụ nke ọ bụla, nke ị nwekwara ike chekwaa na ederede ederede (txt) maka nyocha ọ bụla sochirinụ, dịka ọmụmaatụ na Excel.
Etu ị ga-esi gbakọọ oge kachasị na roulette: anyocha a na-akparaghị ókè!
Ihe bara uru na pụrụ iche banyere mmemme a bụ ikike ịhọrọ nọmba nke ihe nke ohere iji nyochaa.
Ọ bụrụ n’iche maka ya nwa oge, ị nwere ike ịchọta ọtụtụ mmemme ọnụ ọgụgụ maka roulette n’ịntanetị, mana ha niile na-atụle ohere dị egwu, ebe ekele Turbo Bet Calc ihe atụ ị nwere ike ịlele frequencies na igbu oge nwekwara nke ohere ka na-ekwu 'gbara gharịị' dị ka iche iche nke 7 nọmba, 9 ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ space otu na ị chọrọ iji nyochaa.
Na mmechi, m na-egosikwa na, inwe ike ịhọrọ ọnụọgụ nke ihe ndị mejupụtara egwuregwu ahụ (Ọnụ ọgụgụ niile), ọ dịghị ihe na-egbochi gị iji Turbo Bet Calc nakwa maka nyocha nke egwuregwu ndị ọzọ na-abụghị roulette.
Nbudata Nbudata	TurboBC.zip - 1 MB